उपेन्द्र यादवले मधेसलाई धोका दिए : राजेन्द्र महतो « हाम्रो ईकोनोमी
राजपाकै सहयात्री दल फोरमले नयाँ शक्तिसँग एकता गरेको सन्दर्भमा के छ धारणा ?
सुरुवाती दौरमा एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने कुरा भएको थियो । कांग्रेस, कम्युनिष्टबाहेक सबै शक्तिलाई एकताबद्ध भएर देशलाई विकल्प दिने कुरा भएको थियो । तर उनीहरु यो अभियानमा लाग्दै लागेनन्, तयार नै भएनन् । पार्टी निर्माण गर्न काम गरे । वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा कामै गरेनन् ।
अर्काे कुरा, संविधान संशोधन, अधिकार, पहिचान, सुशासन समृद्धिको एजेन्डा छुट्यो । प्रतिपक्षमा रहेर संघर्ष गर्ने कुरा भएको थियो, तर उहाँहरु सरकारसँग जोडिनुभयो । अर्थात जुन काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसको उल्टो भयो । यद्यपि दुई पार्टी स्वतन्त्र छन्, त्यसमा मे केही भन्दिनँ ।
संविधान संशोधनका लागि ६ महिना कठोर आन्दोलन भयो, थुप्रै मानिस शहीद भए । त्यतिबेला फोरम पनि आन्दोलनमा थियो । तर, सरकारको नीति कार्यक्रममा संविधान सर्वस्वीकार्य रहेको र यसमा कुनै विमति छैन भनेर लेखिँदा पनि उपेन्द्रजीले समर्थन गर्नुभयो । यो त सैद्धान्तिक विचलन हो ।
हिँजो संविधान पुनर्लेखनको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, आज उहाँ आफैंले संविधानमा विमति छैन भनेर हस्ताक्षर गर्नुभयो । यो के भयो ? उपेन्द्रजीले देश र दुनियाँलाई जवाफ दिनुपर्छ ।
तर, पार्टी एकता गर्न त तपाईंहरुलाई पनि आहृवान गरिएको थियो
हो सही कुरा । वैकल्पिक शक्ति निर्माणकै लागि बैठक भएको थियो, जसमा हामीलाई पनि बोलाइएको थियो । त्यो बैठकमा चार शक्ति थिए- राजपा, जनमुक्ति पार्टी, फोरम र नयाँ शक्ति । प्रथम चरणमा चार शक्ति र त्यसपछि सबै शक्तिलाई समेट्ने कुरा भएको थियो । तर उहाँहरु त्यता लाग्नु भएन । आफ्नो पार्टी निर्माणतिर लाग्नुभयो ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा नीति, सिद्धान्त र आदर्शका विषयमा सहमति हुनुपर्छ । सरकार छाड्नुपर्‍यो, संविधान संशोधनको मुद्दामा आउनुपर्‍यो, संघर्षमा आउनुपर्‍यो नि । देशलाई विकल्प चाहिएको छ भने हिमाल, पहाड, मधेसका जनताकोे एजेन्डालाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो नि । यो सबै कुरालाई छाडेर पार्टी एकता गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
हामीले पनि ६ वटा पार्टी एकता गरिसकेका छौं । सातौं, आठौंसँग पनि एकता हुन्छ । एकीकरण त हुँदै गर्छ नि । तर, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रयासबाट उहाँहरु पछि हट्नुभयो ।
उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि बढाउन चाहेन, सत्ता छोड्न चाहेन भन्ने तपाईंहरुको आरोप हो ?
हेर्दा त त्यही देखिन्छ । जुन मिसनका लागि बैठक बसेको थियो, त्यही मिसनमा हिँडेको भए त सरकार छोड्नुपर्थ्यो । जुन नीति र कार्यक्रममा संविधानमा कुनै विमति छैन भनिएको छ, त्यो पास हुँदैनथ्यो । संविधानमा सर्वस्वीकार्य छ भन्ने थप्पा लाग्दैनथ्यो । अब त यो संविधानलाई बाबुरामले पनि थप्पा लगाइदिए । उपेन्द्रले पनि थप्पा लगाइदिए । त्यस्तो अवस्थामा राजपा कसरी सहमत हुन्छ ? जुन मुद्दाका लागि ६ महिना संघर्ष गर्‍यो, त्यसलाई छाडेर खाली पार्टी तोड र जोड अभियानमा लाग्न सक्दैन ।
तर उहाँहरु मिलेपछि पनि पहिलो बैठकबाटै राजपालाई वार्तामा आहृवान गरेको छ । अब समाजवादी पार्टीसँग मिल्नुहुन्छ कि नाइँ ?
हेर्नुस्, नीति, सिद्धान्त, आदर्श मिल्यो सबैथोक हुन्छ । मिलेन भने केही हुँदैन ।
तपाईंले भनेको जस्तो नीति, सिद्धान्त र आदर्श मिल्ने अवस्था छ कि छैन त ?
नेपाली जनतालाई विकल्प चाहिएको छ । नयाँ शक्ति निर्माण आवश्यक छ । त्यो शक्तिको आधारमा संविधान संशोधनसहित समृद्धि, सुशासनको सवालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानमा हामी जतिखेर पनि सहयोग गर्न तयार छौं । तर, अहिलेको यथास्थितिमा एकता हुन सक्दैन ।
उनीहरुले के गरे भने एकता हुन्छ त ?
यो विषयमा गृहकार्य भएको छैन । हामी महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छौं । कात्तिकमा गर्ने भनेर मिति तय भएको छ र अब हाम्रो पूरा ध्यान, ऊर्जा महाधिवेशनमै केन्दि्रत हुन्छ । तथापि वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि जुन दिन, जुन शक्तिमाथि भरोसा हुन्छ, त्यसमा सहयोग गर्न हामी सधैं तयार छौं ।
फोरमसँगै राजपालाई मधेस केन्द्रित दल भनिन्थ्यो । अब फोरम रहेन । समाजवादी पार्टी त आफूलाई राष्ट्रिय शक्ति दाबी गरेको छ । राजपाले चाहिँ के गर्छ ?
हेर्नुस्, देशमा कांग्रेस, कम्युनिस्टले राष्ट्रिय शक्ति भनिरहेकै छन् । तर, दुवैले देशको समस्या समाधान गर्न नसक्दा धेरै संघर्षहरु भए । राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुको मतलब सबै छोडेर सिँढीलाई उल्टाइदिने हो ? जनता जे कुराका लागि लडे, मरे, त्यसलाई छोडेर राष्ट्रिय शक्तिको नाममा सबैथोक तिलाञ्जली दिइहाल्नु हो ? यो काम राजपा गर्न सक्दैन । राजपा मूल्य, मान्यता छाडेर कुनै शक्ति निर्माणको पक्षमा छैन ।
उसो भए राजपाको आगामी कार्यदिशा के हो ?
यदि समग्रमा भन्ने हो भने देश सबैको हो । हिमाल, पहाड, तराईमा बस्ने मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, थारु सबैका लागि हो । शासन प्रणालीमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ, प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, पहिचान बन्नुपर्छ । देशलाई समृद्धितर्फ लानुपर्छ । यही एजेन्डाका साथ पार्टी अगाडि बढिरहेको छ । यही कुराका लागि ६ वटा पार्टी मिलेर राजपा बनेको हो । संघर्षको माध्यमबाट उद्देश्यहरु प्राप्ति गर्न काम गरिरहेको छ ।
तपाईँको हरेक ठाउँमा संविधान संशोधन गर भन्न छाड्नुहुन्न, तर प्रधानमन्त्रीले त यसलाई जतिबेला पनि गाउने गीत बनाउनु हुन्न भन्नुभयो । होला त संविधान संशोधन ?
मैले संसदमै प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने भने, यसअघि ६ वटा संविधान आइसक्यो । सबै असफल भयो । यो सातौं संविधान हो । यसलाई पनि गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत बनाउने प्रयास गरेपछि असफल बन्छ । २०४८ सालको संविधानलाई दुनियाँकै सर्वाेत्कृष्ट संविधान हो भनेर यही कांग्रेस कम्युनिस्टले भन्थे । कमा, फुलिस्टप परिवर्तन हुँदैन भने, गरेनन् पनि । त्यही भएर फेल भयो ।
प्रधानमन्त्रीको रबैया यस्तै रहृयो भने यो संविधान पनि कोल्याप्स हुँदा कुनै आश्चर्य हुँदैन । जनताको मागअनुसार संशोधन, परिमार्जन जरुरी हुन्छ । नगरिए फ्याँकिन्छ । मैले रोष्टमबाटै प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेको छु, नश्लवादी चिन्तन र सोच हटाउनुस् । यो देश सबैको हो भने मधेसी, दलित, मुस्लिम, जनजाति सबैले भनिरहेका छन् । यसलाई इन्कार गरेर यो संविधान टिकाउन सकिन्न । यो कुनै गीत होइन, जनताको आवाज हो । यसलाई सुन्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन भनेर आन्दोलन गर्नुर्भयो । यही सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो । अहिले समर्थन फिर्ता लिनुभयो । कति दिनसम्म जपिरहनुहुन्छ संशोधनको माला ?
यो कुनै म्ााला जप्ने कुरा होइन । संविधान देशको मूल दस्ताबेज हो र जनतालाई अधिकार नदिएसम्म यसको बिरोध भइरहन्छ । जनताले अधिकार नपाएसम्म संघर्ष हुन्छ । गजेन्द्रनारायण सिंहले ‘जब तक शोषित इन्सान रहेगा, धर्ती पर तुफान रहेगा’ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले यो त्यसै भन्नु भएको होइन । शोषण, उत्पीडन रहँदासम्म संघर्ष भएको छ ।
संविधान मूल कानुन हो, त्यसको माध्यमबाट विभेद गरिएको छ, अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ । हिमाल, पहाड, तराईका जनतासँग बेइमानी गरिएको छ । यसलाई सुधार नगरिएसम्म आवाज त उठिरहन्छ । संघर्ष कहिले नरम त कहिले गरम हुनसक्छ । तर जनता संघर्ष गरिरहन्छन् । आह्वानकर्ता यसअघि फोरम र राजपा थिए । भविश्यमा राजपा मात्रै हुनसक्छ किनकी फोरमलाई त अर्कै भूत सवार भइसक्यो ।
आन्दोलन गर्नुभयो, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो । तैपनि संविधान संशोधन भएन । अब के गर्ने ?
संसारकै अभूतपूर्व आन्दोलन गरियो । कठोर आन्दोलन गरियो । जनताको सहयोगमा ६ महिनासम्म बन्द, हड्ताल, चक्काजाम नाकाबन्दी गरियो । ज्यानको बाजी लगाएर संघर्ष गरे जनताले । म पनि ज्यानको बाजी लगाएर नाकाबन्दीमा सहभागी भएँ । ज्यान लिने उद्देश्यले हमला भयो । अब पनि सरकारले नसुने जनता फेरि उठ्छन् । जनतामा त्यो तागत छ । जनता कहिल्यै हार्दैनन्, अजेय हुन्छन् । भनिन्न नि, समयको देर छ, अन्धेर छैन ।
तर, प्रदेश २ मा फोरम र राजपाको सरकार छ । फोरम र नयाँ शक्तिको पार्टी एकता, तपाईंहरुले गर्ने भनेको आन्दोलन आदिले सरकारको समीकरणमा कुनै असर गर्छ ?
प्रदेश २ को सरकार आन्दोलनको उपज हो । यो सरकार अहिले पनि आन्दोलन गरिरहेको छ । माथिको समीकरण फोरमले आफ्नो तरिकाले गर्‍यो ठीक छ, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।
तर, मलाई के विश्वास छ भने प्रदेश सरकार संघीयतालाई मजबुत बनाउने सरकार हो । यो सरकार यसैका लागि काम गरिरहेको छ । यो भएन, त्यो भएन, भनिरहेको छ, लडिरहेको छ । यो आन्दोलनलाई उपेन्द्रजीले समाप्त गर्न चाहनुभयो भने अर्काे रुप लिन सक्छ । यो आन्दोलनलाई पनि भत्काइदिनुभयो भने हामी आफ्नै बाटोमा हिँड्छौं ।
अन्तिममा, राजपाको आन्तरिक विषय, पछिल्लो समय पार्टीमा अध्यक्ष मण्डलको बिरोध भइरहेको छ । के होला महाधिवेशनमा ?
विशेष परिस्थितिमा ६ पार्टी एक भएपछि अध्यक्ष मण्डल बनाइएको हो, चक्रीय प्रणाली अनुसार । तर, सारा कार्यकर्ताको सुझाव आइरहेको छ अध्यक्ष मण्डली ठीक छैन, अध्यक्ष प्रणालीमा लैजानुपर्छ । यही आधारमा हामी काम गरिरहेका छौं । तर अन्तिम निर्णय महाधिवेशनले नै गर्छ । तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा अब अध्यक्ष मण्डल रहँदैन ।अनलाईनखबरबाट
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने
जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन बढाउने सरकारको निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार
हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म
एमसीसीएका काम तत्काल रोकिने, दुई अध्यक्षले छलफल गरेर अर्को बैठक बोलाउने
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदले
एमसीसीएका काम तत्काल रोकिने, दुई अध्यक्षले छलफल गरेर अर्को बैठक…
प्रचण्डलाई ओलीको प्रस्ताव : म पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री,